सावधान ! यी साना ७ गल्तिले बिग्रन सक्छ तपाईको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनसावधान ! यी साना ७ गल्तिले बिग्रन सक्छ तपाईको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध
पुरुषका केही यस्ता वानी हुन्छन्, जसले गर्दा तपाई वैवाहिक सम्बन्ध विग्रन सक्छ। दैनिक जीवनमा गरिने केही गल्तिका कारण कयौँ व्यक्तिले बच्चा बनाउन सकेका हुँदैनन्। जस कारणले उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धमा उथलपुथल ल्याएको हुन्छ। वैवाहिक जीवनलाई सुखद र सम्पन्न बनाउनका लागि केही त्यस्ता गल्ति हुन्छन् जो कहिलै गर्न नहुने अनुसन्धानले देखाएको छ। कतै तपाईले त्यस्ता गल्तिका कारण आफ्नो वैवाहिक जीवन त विगार्नु भएको छैन् ??यी ७ गल्ति सुधार्नुहोस्
१ यदी तपाईले ज्यादै टाइट कपडा लगाउनुहुन्छ भने यो वानी तपाईले सुधार गर्न जरुरी छ। बढी टाइट कपडा लगाउदा अण्डकोशको थैलीको टेम्परेचर बढ्न सक्छ । यसका कारण शुक्रकिटको संख्या घटन थाल्द छ।
२ यदी तपाईले धेरै तनाब लिनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् । लगातार तनाबमा रहदा शरीरमा हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ। साथै शरीरको ब्लड सर्कुलेशन पनि बिग्रिदै आन्छ। यसले शुक्रकिटको संख्या घट्न थाल्छ।
३ भटमासबाट उत्पादित खानेकुरा बढी मात्रामा खानुहुन्छ भने यस्तो गल्ति छोडिदिनुहोस्। हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको अनुसन्धान अनुसार भटमासबाट उत्पादित खानेकुरा बढी खाएमा यसले आइसा्फ्लेवोन शुक्रकिटको संख्या क मगर्दछ।
४ लागुऔषध सेवन गर्नुहुन्छ भने यस्तो वानी आजैबाट छोडिदिनुहोस्। रक्सी, चुरोट जस्ता अन्या नशालु पर्दाथको सेवनका कारण शरीरमा स्ट्रेस हर्मोनको मात्रा बढ्न सक्छ। जसले गर्दा शुक्रकिटको संख्या घटाउछ।
५ यदी तपाईको ल्याप्टप खुट्टामा राखेर चलाउने बानी छ भने आजैबाट सावधान रहनुहोस्। लामो समय ल्याप्टप खुट्टामा राखेर चलाउनुभयो भने यसको हिट स्क्रूटम तर्फ जान्छ । खाना खाने समय यस्तो गर्दा पनि शुक्रकिटको संख्या घट्न थाल्छ।
६ यदी तपाई पर्याप्त मात्रामा सुत्नुहुन्न भने पनि सावधान रहनुहोस्। दैनिक करिब ७ घण्टा नसुत्नु भयो भने तपाईको शरीरमा स्ट्रेस बढाउने हर्मोनको मात्रा बढ्न थाल्छ। यसले शरीरमा ब्लड सर्कुलेशन बिग्रन थाल्छ, जसका कारण पनि शुक्रकिटको मात्रा घट्न थाल्छ।
७ यदी तपाईले बढी मात्रामा कफी पिउनुहुन्छ भने पनि सावधान रहनुहोस्। म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटरको अनुसन्धान अनुसार बढी मात्रामा कफी पिउदा क्याफिन स्ट्रेस हर्मोन बढ्छ। जसले शुक्रकिटको संख्या घटाउछ।